Hand Sanitizer ကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုသုံးပေးသင့်လဲ? – Trend.com.mm
လက်တွေမသန့်ရှင်းဘူးလို့ခံစားရတဲ့အခါ ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးကြောလိုက်တာက ပိုးမွှားတွေကို အကောင်းဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဆပ်ပြာအလွယ်တကူမရတဲ့အခါမျိုးမှာရော??
လက် အရမ်းမညစ်ပတ်နေဘူး။ဒါပေမဲ့ စေးကပ်ကပ်ဖြစ်နေတယ်။မသန့်ရှင်းသလိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင် Hand Sanitizer ကိုသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ဆပ်ပြာမရှိလို့ ဘာမှမသုံးတာထက်စာရင် Hand Sanitizer သုံးတာက ဘတ်တီးရီးယားတွေကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
လက်က အရမ်းညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Hand Sanitizer ကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးကြောတာကသာ အကောင်းဆုံးပါ။လေ့လာချက်တွေအရ အယ်လ်ကိုဟော ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်တဲ့ Hand Sanitizer တွေဟာ အယ်လ်ကိုဟောနည်းပါးတဲ့
Hand Sanitizer တွေထက် ဘတ်တီးရီးယားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
ရထား၊ဘတ်စ်ကားစီးရင် လက်တန်းကိုကိုင်ပြီးတဲ့အခါမျိုး၊တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုကိုင်ပြီးတဲ့အခါမျိုး၊ဘတ်တီးရီးယားတွေကပ်ငြိနေနိုင်တဲ့လက်တွန်းလှည်းလိုပစ္စည်းမျိုးကိုင်ပြီးတဲ့အခါမျိုး၊လက်နဲ့အထိအတွေ့များတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာ Hand Sanitizer ကို သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
Hand Sanitizer သုံးတဲ့အခါမှာလည်း မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးစွဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်။တစ်ချို့က လက်ထဲထည့်ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲပွတ်လိုက်တယ်။ပြီးရင် တစ်ရှူးနဲ့သုတ်ပစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။လက်ထဲမှာ အနည်းငယ်ထည့်ပြီးရင်ခြောက်သွားတဲ့အထိ လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို
ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးတာလောက်တော့ ဘတ်တီးရီးယားတွေကိုသန့်ရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ ဆပ်ပြာအလွယ်တကူမရတဲ့အခါမျိုးဆို ဒါလေးဆောင်ထားတာက ပိုပြီးအဆင်ပြေစေမှာပါ။သတိထားရမှာကတော့ Hand Sanitizer ကိုကလေးတွေရှိတဲ့နေရာနားမှာမထားဖို့နဲ့ နေ့တိုင်းနီးပါးမသုံးစွဲမိဖို့ပါပဲ။